1570 ~ 1603nm L-band EDFA Amplifier ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Optic module တွေ > ဖိုင်ဘာ Amplifier module တွေ > 1570 ~ 1603nm L-band EDFA အသံချဲ့စက်
1570 ~ 1603nm L-band EDFA Amplifier နှင့်ပတ်သက်သောဆက်စပ်သည်။ 1570 ~ 1603nm L-band EDFA Amplifier ကိုပိုမိုနားလည်ရန်သင်မျှော်လင့်ပါသည်။ အတူတူပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်လက်ပူးပေါင်းရန်အသစ်သောဟောင်းနွမ်းသောဖောက်သည်များကိုကြိုဆိုပါသည်။
1570 ~ 1603nm L- တီးဝိုင်း EDFA Amplifier ၏ 1. နိဒါန်း
L-band erbium-doped fiber amplifier (EDFA) သည် optical fiber amplifier တစ်ခုဖြစ်သည့် optical fiber laser лазерသို့မဟုတ် optical fiber fiber communication system ။ ၎င်း၏လည်ပတ်မှုလှိုင်းအလျားသည် ၁၅၇၀ မှ ၁၆၀၃nm ထိမြင့်မားသောအမြတ်နှင့်ဆူညံသံနည်းသောအားသာချက်များရှိသည်။
1570 ~ 1603nm L-band EDFA အသံချဲ့စက်၏ 2. အင်္ဂါရပ်
1570 ~ 1603nm L-band EDFA Amplifier ကိုအသုံးပြုခြင်း
4. Optical-Electrical Characteristic 1570 ~ 1603nm L-band EDFA Amplifier
လှိုင်းအလျား operating nm 1570 ~ 1603 L- တီးဝိုင်း
သွင်းအားစု dBm -6 ~ + 3
Saturation output ကိုပါဝါ dBm 15/17/20/23/25 @ -3dBm input ကို
ဆူညံသံပုံ dB 5.0 @ -3dBm input ကို
polarization ကိုမှီခိုအမြတ် dB <0.3
5. 1570 ~ 1603nm L-band EDFA အသံချဲ့စက်ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
A: Module အမျိုးအစားနှင့် Benchtop အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။
hot Tags:: 1570 ~ 1603nm L-band EDFA အသံချဲ့စက်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
Optical Sensor အတွက် Pulsed Erbium-doped Fiber Amplifier